ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် တသောသောရယ်နေစေရမယ့် ဟာသရုပ်ရှင် (၃) ကား - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ … Stella ကလေ စိတ်ဖိစီးမှု များလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ရယ်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတွေ ကြည့်ရတာသဘောကျတယ်။ ဟာဒယရွှင်ဆေးတိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကြောင့် အမောတွေပြေသွားသလိုပဲ။ အခု Stella ပြောပြပေးမယ့် ရုပ်ရှင်တွေက ပြက်လုံးတွေနဲ့အတင်းကြီးရယ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့ အမူအရာနဲ့ ဇာတ်လမ်းအသွားအလာတွေကိုက ရယ်နေရတဲ့ဇာတ်ကားတွေပါ။
အသံတုသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လူပျော်ကြီး Daniel က သူ့ဇနီး Miranda နဲ့ စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် ကွာရှင်းလိုက်ရတဲ့အခါ ကလေးတွေကို အုပ်ထိန်းခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့မခွဲချင်တဲ့အခါ အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကလေးထိန်းအဘွားကြီး Mrs Doubtfire ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ဇနီးအိမ်မှာ အလုပ်လုပ်သွားလုပ်ပါတော့တယ်။ Daniel တစ်ယောက် ဘာတွေအလွဲလွဲအချော်ချော်လုပ်ဦးမှာလဲ၊ Miranda ကကော Daniel ဟန်ဆောင်တာတွေကို ရိပ်မိသွားမှာလား၊ ကလေးတွေကို အုပ်ထိန်းခွင့်ကော ပြန်ရမှာလား စတာတွေကိုတော့ Mrs Doubtfire မှာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ (မာမီရှိန်းရဲ့ မူရင်းကားလို့ ဆိုရမှာပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်..)
Related article >>> Netflix ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ (၄) ကား
FBI agent လူမည်းညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကို ထောင်ဖမ်းဖို့ ချမ်းသာတဲ့သူဌေးသမီးညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်သဘောမျိုးဟန်ဆောင်ရပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိးကြောင့် ညီအစ်မနှစ်ယောက်က မကူညီနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အဆုံး လူမည်းညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကနေ လူဖြူညီအစ်မနှစ်ယောက်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြန်ပေးသမားတွေကို ဖမ်းဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် အသားမည်းမည်းယောကျာ်းရင့်မာကြီးတွေကနေ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖက်ရှင်ကျကျညီအစ်မနှစ်ယောက်အဖြစ် ဟန်ဆောင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုလူတွေကို ဂျင်းထည့်မလဲ၊ အနားကပ်လာတဲ့ဘဲတွေကို ဘယ်လိုပညာပေးမလဲ၊ ဘာတွေအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ White Chicks ကို ကြည့်ရင်းသိရမှာပါ။
အမျိုးသားသူနာပြု Greg Focker က သူ့ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းခင် ကောင်းမလေးမိဘတွေနဲ့တွေ့ဖို့ အိမ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ယောက္ခထီးလောင်းရဲ့ ပညာပေးမှုတွေအောက်မှာ ဒုက္ခလှလှတွေ့ပါတော့တယ်။ ယောက္ခထီးအဘိုးကြီးက ဘယ်လိုတွေပညာပြမှာလဲ၊ အူကြောင်ကြောင် Greg နဲ့ သူ့ရဲ့ယောက္ခထီးလောင်းကြားက ပဋိပက္ခတွေက ပြေလည်ပါ့မလား၊ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ကော နီးစပ်ပါ့မလား ဆိုတာကတော့ Meet The Parents မှာ ကြည့်ပြီး အူတက်အောင်ရယ်ကြတာပေါ့။
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် နာမည်ကျော် ထိတ်လန့်သည်းဖိုသရဲကား (၃) ကား
ကဲ … ဒါကတော့ ယောင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ကြည့်လို့ရမယ့် ဟာသရုပ်ရှင် (၃) ကားပါ။ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးပါတဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းအသွားအလာကလည်း အရမ်းကောင်းတာကြောင့် ယောင်းတို့ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်မှ ရုပ်ရှင်ကားအသစ်လေးတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ကြစို့ ….
ယောငျးတို့ရေ … Stella ကလေ စိတျဖိစီးမှု မြားလာတဲ့အခါမြိုးတှမှော ရယျရတဲ့ ရုပျရှငျလေးတှေ ကွညျ့ရတာသဘောကတြယျ။ ဟာဒယရှငျဆေးတိုကျတဲ့ ရုပျရှငျတှကွေောငျ့ အမောတှပွေသှေားသလိုပဲ။ အခု Stella ပွောပွပေးမယျ့ ရုပျရှငျတှကေ ပွကျလုံးတှနေဲ့အတငျးကွီးရယျခိုငျးတာမြိုးမဟုတျဘဲ ဇာတျဆောငျတှရေဲ့ အမူအရာနဲ့ ဇာတျလမျးအသှားအလာတှကေိုက ရယျနရေတဲ့ဇာတျကားတှပေါ။
အသံတုသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ လူပြျောကွီး Daniel က သူ့ဇနီး Miranda နဲ့ စိတျသဘောထားမတိုကျဆိုငျမှုတှကွေောငျ့ ကှာရှငျးလိုကျရတဲ့အခါ ကလေးတှကေို အုပျထိနျးခှငျ့လညျး ဆုံးရှုံးသှားပါတယျ။ ကလေးတှနေဲ့မခှဲခငျြတဲ့အခါ အဈကိုဖွဈသူနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ကလေးထိနျးအဘှားကွီး Mrs Doubtfire ယောငျဆောငျပွီး သူ့ဇနီးအိမျမှာ အလုပျလုပျသှားလုပျပါတော့တယျ။ Daniel တဈယောကျ ဘာတှအေလှဲလှဲအခြျောခြျောလုပျဦးမှာလဲ၊ Miranda ကကော Daniel ဟနျဆောငျတာတှကေို ရိပျမိသှားမှာလား၊ ကလေးတှကေို အုပျထိနျးခှငျ့ကော ပွနျရမှာလား စတာတှကေိုတော့ Mrs Doubtfire မှာ ဆကျကွညျ့လိုကျပါနျော။ (မာမီရှိနျးရဲ့ မူရငျးကားလို့ ဆိုရမှာပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ..)
Related article >>> Netflix ကနေ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ အကောငျးဆုံးရုပျသံဇာတျလမျးတှဲ (၄) ကား
FBI agent လူမညျးညီအဈကိုနှဈယောကျဟာ ပွနျပေးဆှဲသူတှကေို ထောငျဖမျးဖို့ ခမျြးသာတဲ့သူဌေးသမီးညီအဈမနှဈယောကျရဲ့ ဘျောဒီဂတျသဘောမြိုးဟနျဆောငျရပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိးကွောငျ့ ညီအဈမနှဈယောကျက မကူညီနိုငျတော့ဘူးလို့ ပွောတဲ့အခါ ရှေးခယျြစရာမရှိတဲ့အဆုံး လူမညျးညီအဈကိုနှဈယောကျကနေ လူဖွူညီအဈမနှဈယောကျယောငျဆောငျပွီး ပွနျပေးသမားတှကေို ဖမျးဖို့စီစဉျရပါတော့တယျ။ တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ အသားမညျးမညျးယောကျြားရငျ့မာကွီးတှကေနေ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးဖကျရှငျကကြညြီအဈမနှဈယောကျအဖွဈ ဟနျဆောငျရတဲ့အခါ ဘယျလိုလူတှကေို ဂငျြးထညျ့မလဲ၊ အနားကပျလာတဲ့ဘဲတှကေို ဘယျလိုပညာပေးမလဲ၊ ဘာတှအေလှဲလှဲအခြျောခြျောဖွဈမလဲဆိုတာကတော့ White Chicks ကို ကွညျ့ရငျးသိရမှာပါ။
အမြိုးသားသူနာပွု Greg Focker က သူ့ကောငျမလေးကို လကျထပျခှငျ့မတောငျးခငျ ကောငျးမလေးမိဘတှနေဲ့တှဖေို့ အိမျလိုကျသှားတဲ့အခါမှာတော့ ယောက်ခထီးလောငျးရဲ့ ပညာပေးမှုတှအေောကျမှာ ဒုက်ခလှလှတှပေ့ါတော့တယျ။ ယောက်ခထီးအဘိုးကွီးက ဘယျလိုတှပေညာပွမှာလဲ၊ အူကွောငျကွောငျ Greg နဲ့ သူ့ရဲ့ယောက်ခထီးလောငျးကွားက ပဋိပက်ခတှကေ ပွလေညျပါ့မလား၊ သူ့ကောငျမလေးနဲ့ကော နီးစပျပါ့မလား ဆိုတာကတော့ Meet The Parents မှာ ကွညျ့ပွီး အူတကျအောငျရယျကွတာပေါ့။
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာ အသဈထှကျရှိလာမယျ့ နာမညျကြျော ထိတျလနျ့သညျးဖိုသရဲကား (၃) ကား
ကဲ … ဒါကတော့ ယောငျးတို့ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာ ကွညျ့လို့ရမယျ့ ဟာသရုပျရှငျ (၃) ကားပါ။ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီးပါတဲ့အပွငျ ဇာတျလမျးအသှားအလာကလညျး အရမျးကောငျးတာကွောငျ့ ယောငျးတို့ကနြေပျကွလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ဒါဆိုနောကျတဈပတျမှ ရုပျရှငျကားအသဈလေးတှနေဲ့ ပွနျတှကွေ့စို့ ….
Tags: Comedy, Entertainment, Fun, Movie, Movie review